यो कहालीलाग्दो एउटा इतिहाँस : गौतम बुद्ध असफल भएपछि यसरी बगेको थियो ७७ हजार मानिसको र’गत ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यो कहालीलाग्दो एउटा इतिहाँस : गौतम बुद्ध असफल भएपछि यसरी बगेको थियो ७७ हजार मानिसको र’गत !
यो कहालीलाग्दो एउटा इतिहाँस : गौतम बुद्ध असफल भएपछि यसरी बगेको थियो ७७ हजार मानिसको र’गत !
आज दुई ५६४ औँ बुद्धजयन्ती विश्वभर मनाइँदै छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसहित विभिन्न स्थानमा गौतम बुद्धप्रति श्रद्धा र भक्ति प्रकट गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ । कोभिड–१९ को जोखिमका कारण यसपटक औपचारिक कार्यक्रम भने आयोजना गरिएको छैन । यस वर्ष बुद्ध जन्मस्थलमा मनाइने बुद्धजयन्तीका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको छ । औपचारिक कार्यक्रम स्थगन भए पनि आज सामाजिक दूरी कायम गरेर मायादेवी मन्दिर परिसरमा दुई हजार ५६४ दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको कोषका कामु सदस्य सचिव ज्ञानिन राईले जानकारी दिनुभयो । आज बिहान विहारका भिक्षु र गुरुआमाहरुले कोरोना भाइरसका कारण मृ/त्यु भएकाहरुको चिरशान्तिको कामना तथा संक्रमितको स्वास्थ्यलाभको काम गर्दै प्रार्थना गर्नुभएको छ ।
‘नेपालः भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल, बौद्धधर्मको उद्गम भूमि तथा विश्व शान्तिको मुहान’ भन्ने नारासहित बुद्धजयन्ती तथा तेस्रो अन्तरररष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन मनाउने तयारी गरिए पनि कोरोना संक्रमणका कारण स्थगन गरिएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले कार्यक्रमको तयारी गर्न नसकिने र जोखिम बढ्ने भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनमा विकास कोषले सबै कार्यक्रम स्थगन गरेको हो । ‘संसारमा दुःख छ र दुःख हटाउन सके निर्वाण वा शान्ति प्राप्त हुन्छ’ भन्ने ज्ञानका प्रवत्र्तक शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जन्मजयन्ती बुद्ध पूर्णिमा वा वैशाख पूर्णिमाका दिन विश्वभर मनाइन्छ । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन भएकाले यस दिनलाई बौद्ध धर्मावलम्बीले त्रिसंयोग दिवसका नामले महत्वपूर्ण दिनका रुपमा लिने गरेको भिक्षु सागर धम्मले बताए ।
त्यसपछि उहाले पहिलो उपदेश सारनाथमा पुगेर दिनुभएको थियो । त्यहीबाट सुरु हुन्छ उनको अन्तरध्यानमय यात्राको सुरुवात । त्यसबेला उहाँले पाँचजना गृहत्यागी भिक्षुहरुलाई उपदेश दिएका थिए । भगवान बुद्धबाट उपदेश लिने पहिलो भिक्षु कौडन्य हुनुहुन्थियो, जो कपिलवस्तुकै हुनुहुन्थियो । त्यस्तै, उहाँको जीवनसँग जोडिएकी पत्नी यशोधरानै पहिलो महिला भिक्षुनी हुनुहुन्थियो । कपिलवस्तुका राजा शुद्धोदन र रानी मायादेवीको कोखबाट जन्मिएको सिद्धार्थ गौतमलाई हुर्काउने काम भने राजाकी कान्छी रानी प्रजापतिबाट भएको बताइन्छ । बुद्धत्व प्राप्त गर्न दरबारबाट बाहिर निस्केका सिद्धार्थ दोश्रो वर्षावासमा कपिलवस्त पुग्नुभएको थियो ।
कुशे-औंसी अर्थात् बाबाको मुख हेर्ने दिन ! पिता किन पुज्य छन् ?
दुःख कष्टलाई पन्छाउन चाहानुहुन्छ भने :यस्ता ?️?️ मन्त्रहरु जप गर्नुहोस्- अवस्य मुक्ति मिल्छ !